ဘုရားတွေဆက်လက်ဖူးကြရအောင်...ပုဂံနယ်မြေထဲဝင်တော့ ညနေစောင်းနေပြီလေ၊ ကားဦးတည့်ရာသွား
ကြတာပေါ့.. လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ဘုရားတွေလှည့်ပတ်ပြီး ဖူးကြတာပေါ့ရှင်။ ဒီအာနန္ဒာဘုရားရောက်တော့ မိုး
ညဘုရားဖူးရတာလည်းအရသာတမျိုးပေါ့..မီးသိပ်မလင်းဘဲ စလိုက်လောက်ဘဲထွန်းတာကို အဝေးကနေ
အာနန္ဒာဘုရားဟာ သရပါတံခါးရဲ့ အရှေ့တောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့
ကောင်းမှု့တော်ဘုရား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးဟာ နန္ဒမူလှိုဏ်ဂူတော်က ကြွရောက်လာကြတဲ့ ရဟန္တာမထေရ်မြတ် တို့ဆီကလှိုဏ်ဂူတော်အကြောင်းကြားသိရပြီးတဲ့နောက်သဘော ကျပြီး နန္ဒမူ လှိုဏ်
ဂူပုံစံ စေတီတော်ကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းများ အရသိရှိ ရ ပါတယ်။
အာနန္ဒာဘုရား ပန္နတော်ပုံဟာ ပုဂံမှာရှိတဲ့ ဘုရားအားလုံးနဲ့ မတူညီတဲ့ဂရိကြက်ခြေခတ်ပုံဖြစ် ပါတယ်။
အာရုံခံလေးဘက်မှာ မုဒ်လေးမုဒ်ကို ထားရှိပြီးတော့ အလည်လေးမျက်နှာမှာ မက်ရပ်ရုပ်ပွားတော်
ကြီးလေးဆူကို ပူဇော်ထားရှိတာကိုလဲ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အတွင်းဘက်စက်ြန်ပတ်လမ်း၂လမ်းကိုအလင်း
ရောင် လုံလောက်စွာ ရရှိအောင် ဗိသုကာပညာနဲ့ စီစဉ်ထားရှိပုံကလဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဂူဘုရားအပြင်ဘက် ပစ္စယာမှာ ၅၅၀ဇတ်နိပါတ် စဉ့်ကွင်းတွေကိုမြင်တွေနိုင်ပါတယ်။
အထဲဖက်မှာတော့ အလင်းရောင်တော်တော်နဲပါတယ် ဓါတ်ပုံရိုက်တာမမိုက်ပါဘူး။ အလင်းထည့်ရိုက်တော့
လည်းဘုရားမှာကပ်ထားတဲ့ အဝါရောင်ဆေးတွေ အလင်းပြန်လို့..ကဲပါလေ..ရသလောက်ပေါ့..
ဒီတံခါးကြီးကတော့ တကဲ့ဧရာမ အကြီးကြီးပါဘဲ ရေးထားတဲ့စာတမ်းကတော့" ရေရှည်တည်တံခိုင်မြဲဖို့ မတွန်းပါနဲ့"တဲ့ စကဒ်ထမိန်ကြပ်ကြပ်ကြီးနဲ့ထုပ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတသိုက်က ခပ်တည်တည်ဘဲ....... ဟယ်..တွန်းလို့ရတယ်တော့ ဆိုပြီး တယောက်ပြီး တယောက်တွန်းကြည့်နေကြတယ်..တံခါးအောက်မှာ
ကြမ်းတုံးကြီးခံထားတော့ တံခါးကို နဲ့ သလိုဖြစ်ပြီး တံခါးက လူပ်နေပါတယ်...အံသြစွာနဲ့ သူတို့ကိုဘုကြည့်
ပေးလည်း မသိသလိုနေကြလို့ ခင်လျှာရှည်ပီပီ..စာတမ်းကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး ပြောလိုက်မိပါတယ် မတွန်းဖို့
ရေးထားတယ်လေ..မျက်စောင်းတွေတလှေကြီးဝိုင်းထိုးကြတာ မယ်ငီးပြာကျမတတ်ပေါရှင်..း)))
နောက်ဖက်ခြမ်းကြတော့ ပိတ်ထားတယ်..ပြင်ဆင်နေတယ်နဲ့တူတယ်..ကိုယ်ကတော့ ဟိုးတွေ့ရတဲ့ အုတ် တုံးတွေကိုအရမ်းကြည့်ချင်တာဘဲ..နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အုတ်တွေ ဘယ်လောက်လှပသပ်ရပ်မလဲ မြင်
နောက်တနေရာပြောင်းကြပါတယ်...ဗူးဘုရားတဲ့....ပတ်ပတ်လည်က ဧရာဝတီမြစ်ဆိုပါလား.. ဘာမှမမြင်ရ ဘူးလေ..မှောင်မဲနေတာဘဲ...မကျေနပ်ဘူး..ညဘုရားဖူးကိစ္စဒီမှာဘဲရပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး တည်းခိုရာရှာပါ
ကိုယ်တို့အကြိုက်ပေါ့..အပေါ်တက်စရာမလို..လေဝင်လေထွက်ကောင်း အခန်းကျယ်ပါတယ်..ဈေးလည်း မဆိုးပါဘူး...မနက်စာမပါ..
ကိုင်း..စောစောထပြီး..မနက်စာစား( ပုဂံမှာဖွင့်တဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်း)) ဓါတ်ပုံတော့မရိုက်မိဘူး..
ကဲ..မြစ်ကြီး ဧရာဝတီတဲ့...ဟိုး..ဖက်ကမ်းကို ကူးဖို့အချိန်မလောက်တာနဲ့..ဒီအတိုင်းလှမ်းမျှော်ကြည့်ပြီးကျေ
ဗူးဘုရားဟာ ပုဂံမြို့မြောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဗူးဘုရားဟာ ရှေးဟောင်း
ပျူစေတီပုထိုးပုံစံဖြစ်ပြီး ပျူတွေရဲ့ ရာဇဝင် အကြောင်းအရာတွေနဲ့လဲဆက်စပ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေး မှာတည်ရှိနေတာမို့ မြစ်ရေတိုက်စားမှု့ဒဏ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၇၅
ခုနှစ်မှာတော့ စေတီ တစ်ခု လုံးမြစ်ထဲပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရလို့ ၁၉၇၈ခုနှစ်မှာ အသစ် ပြန်လည်တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..တဲ့။
ဟိုး...အောက်ဖက်ကဆိုင်တွေကို..ဆွဲရိုက်ကြည့်တာ..အကြော်သည် ၂ယောက်မနက်စာရောင်းဖို့ အဆင် သင့်ပြင်နေကြတာလေ..။
မြစေတီဘုရား မြင်းကပါရွာရဲ့ မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ် မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ထင်ရှားလှတဲ့မြစေတီ
ကျောက်စာလို့ခေါ်တဲ့ ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ ကြောင့်လဲမြစေတီဘုရားကို လူသိများ လှပါတယ်။ မြစေ တီဘုရားနေရာမှာ ရှေးခေတ်အခါက ဂူဘုရားတစ်ဆူရှိခဲ့ပြီး ရာဇကုမာရ်မင်းသားကခမည်းတော်ကျန်စစ်
သားမင်းကြီးကို ရွှေဆင်းတုရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူရေစက်ချလှူစေခဲ့ပြီး ဌာပနာမှု့ပြုခဲ့တဲ့ ဂူဘုရား တစ်ဆူဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါတယ် မြစေတီဂူဘုရားဟာ ကုန်းဘောင်ခေတ်မှာပျက်စီးယိုယွင်း သွားလို့ စေတီတော်သစ်တစ်ဆူ တည်ခဲ့ပါတယ်။
မြစေတီကျောက်စာတိုင် ကတော့ ဒီ ၂ဝ၁၅မှာ ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်။
ကျောင်းတုံးက သင်ဖူးတာတွေ ဘာတခုမှမမှတ်မိပါဘူး..
တကယ်တော့ ကျောက်စာဟာ ကျိန်စာမတမျိုးပါလို့ ကျောက်တုံးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငြင်းခုံစကားများဖူးတာ
သဲပန်းချီကားတဲ့..ဈေးမနည်းဘူးဆရာ... ကျမကိုပြောတာ ၂သောင်းလောက်ရှိတယ်..
သူကလည်း အောင်မြေနင်းပြီး ပြုံစိစိနဲပ ဘာတွေဆုတောင်းလည်းမသိ...
သွားရင်းလာရင်း..နဲ့ရိုက်တာ...စေတီအမှတ်ဘယ်လောက်ကြောင်း!!!နံမည်မရှိတဲ့ ဘုရားကို နံပါတ်တွေ တပ်ပေးတဲ့ ဆြာကီကွေး ကိုတော့ ဆံလံတင်ပါတယ်..အရောင်တွေတင် ထုံးပြန်သုတ်လို့ ယူနက်စကိုက
တခုမှ ရှေးဟောင်းကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် မသတ်မှတ်ပေးတော့တာလေ....
မနူဟာဘုရားဟာ မြင်းကပါရွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ သထုံဘုရင် မနူဟာမင်းရဲ့ ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ မနူဟာမင်းက တည်ခဲ့တာမို့ မနူဟာဘုရားလို့ အမည်တွင်ပါတယ်..တဲ့။
တော့ကျပ်တည်းစွာနေထိုင်ရတာကိုပြောပြချင်တဲ့သဘောနဲ့ ဘုရားဆင်းတုတော်ကြီးတွေကို ကျပ်ကျပ်တည်း တည်း ဖြစ်နေအောင် တည်ထားခဲ့တယ် ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား ရှမ်းမကို အကြီးအကျယ် ရှင်းလင်းပြောပြ
လောကနန္ဒာစေတီသည်ပုဂံတွင်ရှိသော ရှေးဟောင်းဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။ အေဒီ ၁၀၅၉တွင် အနော် ရထာမင်းတည်ခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်းသည် သီဟိုဠ်ကျွန်းမှ ဆက်သလိုက်သော စွယ်တော်ကို ထပ်မံ ပွား၍ လောကနန္ဒာ သင်္ဘောဆိပ်အနီး ကုန်းမြင့်တွင် လောကနန္ဒာ စေတီတည်၍ဌာပနာခဲ့သည်။စေတီကို
အောက်ခြေတွင် ရှစ်ထောင့် ပစ္စာယာခံထားပြီး ရှစ်ထောင့် ပစ္စယာ အလယ်တွင် ပစ္စယာသုံးဆင့်နှင့်ခေါင်း
လောင်းပုံ ရှည်ရှည် ဖေါင်းရစ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။စေတီကို ခေတ်အဆက်ဆက် ပြုပြင် မွမ်းမံခဲ့သဖြင့် စေတီအသစ်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။လောကနန္ဒာစေတီ အရှေ့ဘက် တန်ဆောင်း အတွင်းတွင် သဲကျောက်အမာစားဖြင့် ထုလုပ်ထားသည့် ၁.၈၃မီတာ(၆ပေခန့်) မြင့်သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဆင်းတု (ဈာနမုဒြာ) ကိုဖူးမျှော်နိုင်ပါသည်။
လောကနန္ဒာဘုရားအနီးတွင် လောကနန္ဒာဘေးမဲ့ဥယျာဉ်တည်ရှိသည်။ ဘေးမဲ့ဥယျာဉ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ရှားပါး မျိုးစိတ်စာရင်းဝင် ကြယ်လိပ်များကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် မွေးမြူခဲ့ပြီး ကောင်ရေ ၄၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း သိရှိရပါ တယ်။ ရွှေသမင်၊ ကြိုးကြာ၊ သင်္ဘောယုန်များအား ခြံခတ်မွေးမြူထားကာ ဒရယ်၊ ဆတ်၊ ဂင်လိပ်၊ ဒေါင်း၊
ကြောင်ဝံပိုက်၊ ယုန်၊ ကြက်တူရွေးတို့ကို သဘာဝအတိုင်း မွေးမြူထားကြောင်းသိရသည်။
သဗ္ဗညုဘုရားကတော့ ပုဂံမြို့ဟောင်းအတွင်း အရှေ့တောင်ဘက် ထောင့်မှာ တည်ရှိပါတယ်။အလောင်း စည်သူမင်းရဲ့ ကောင်းမှု့တော်ဖြစ်ပါတယ်။
သဗ္ဗညုဘုရားဟာ ဥာဏ်တော် ပေ၂၀၀ လောက်အမြင့်ရှိပြီး ရှေးခေတ်အခါက ရဟန်းသံဃာတော်တွေ ပရိယတ္တိစာပေလေ့လာဖို့နဲ့ ပိဋကတ် တိုက်သဖွယ် အသုံးပြုခဲ့ကြတာလို့လေ့လာသိရှိ ရပါတယ်။
ဘေး တက်လှိုဏ်ဂူဘုရားကြီးဖြစ်ပြီး ဆင်းတုတော်ထားရှိတဲ့ကန္ဓကုဋိတိုက်ခေါင်မိုးပေါ် မှာအုတ်တွေနဲ့
ပုဂံတစ်ဝိုက်မှာ ထုထည်ကြီးမားလှပြီး ဥာဏ်တော်အမြင့်ဆုံး ဂူဘုရားကြီးဖြစ်တာမို့ အဝေးတစ်နေရာကနေ ကြည့်ရင်တောင် ထင်ရှားပေါ်လွင်လှပါတယ်။
အပေါ်က ရှေ့နောက်တောင်မြောက် ပတ်ချာလည် လှည့်ပြီး..ဓါတ်ပုံတွေရိုက်
ကျမပုဂံဘုရားသမိုင်းကို မသိပါဘူး..အခုဒီပုဂံအကြောင်းတင်မယ်လုပ်တော့ သမိုင်းကြောင်းလည်းမထည့်
ရင်မကောင်းတာနဲ့ အပ်ချလောင်းဆိုပြီး ဂူဂဲတန်ခိုးနဲ့ရှာလိုက်တော့ တွေ့ပြီ..ဒီကနေ စာလုံးစောင်းထားတဲ့ အပိုင်းတွေအားလုံးက တိုက်ရိုက်ကူးချလာပါတယ်..အဟဲ..
နောက်ပိုင်း ကျမမိတ်ဆွေများ ပုဂံကိုသွားမယ်ဆိုရင် သမိုင်းသိအောင်လို့ပါရှင်...ညောင်ဦးဘလော့လေး ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်...လို့..
ဗိုက်ဆာပြီလေ...နောက်တခါကျရင် ပုဂံမှာ စားဖို့အသင့်တော်ဆုံး ထမင်းဆိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်...
အော်..တခုပြောဖို့ကျန်သွားတာက ကြိုးတချောင်းထဲ ဘောလီလိုလို ရှင်မြီးလိုလို ဝတ်ပြီးခေတ်ရှေ့လွန်နေ တဲ့မြန်မာဘုရားဖူး တသိုက်တွေ့တော့...Oh my Goh...ဆိုပြီးမယ်ငီး ဘိုဆန်စွာအော်မိပါတယ်..အဟီး. ^_^ @_@
Posted by မီးမီးငယ် at 8:03 PM
ဆန်းစနေ၀န်း January 19, 2016 1:52 AM
ပုဂံဘုရားတွေ ဖူးပြီး ပြန်သွားပါတယ်
မီးမီးငယ် January 20, 2016 10:10 PM